.ပိုင်တံခွန်ထံကနေ မထင်မှတ်ထားတဲ့ လက်ဆောင်လေးရရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့် ပျော်ရွှင်မဆုံးဖြစ်နေတဲ့ ဖြူဖြူကျော်သိန်း. – Askstyle
.ပိုင်တံခွန်ထံကနေ မထင်မှတ်ထားတဲ့ လက်ဆောင်လေးရရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့် ပျော်ရွှင်မဆုံးဖြစ်နေတဲ့ ဖြူဖြူကျော်သိန်း.
အသံပါဝါအားကောင်းလွန်းတဲ့ အဆိုတော်ဖြူဖြူကျော်သိန်းနဲ့ ပရိသတ်တွေကို အထူးတလည် မိတ်ဆက်ပေးဖို့မလိုလောက်ဘူးထင်ပါတယ်။ ဖြူဖြူကျော်သိန်းရဲ့ ထွက်ရှိသမျှ သီချင်းတိုင်းဟာဆိုရင် ဂီတလောကမှာ အောင်မြင်လာလျက်ရှိပါတယ်။ သူမကတော့ ဒီဇိုင်းဆန်းဆန်းလေးတွေနဲ့ ဖော်ရွေဆက်ဆံမှုတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်ကို အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဖြူဖြူကျော်သိန်းကတော့ သီချင်းအသစ်တွေ ထွက်ရှိလာနိုင်ဖို့ကိုလည်း ကြိုးစားလျက်ရှိပါတယ်။ သူမရဲ့ အမှတ်တရပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကို လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်ပေးလေ့ရှိသူတစ်ဦးပါပဲနော်။ ဒီနေ့မှာတော့ ဖြူဖြူကျော်သိန်းက”တံခွန် ရေ…ယူ့ရဲ့ Crazy Cream Ice-Cream Sandwich လေး အရမ်းစားကောင်းတယ်‌နော်။ ရေခဲမုန့်ကိုမှ ရောင်စုံပေါင်မုန့်နဲ့ညှပ်စားရတာ မျိုး၊ အဆန်းလေး။ Chocochips ရော၊ Raspberry ရော နှစ်မျိုးလုံးကောင်းတယ်။ နောက် flavour အသစ်တွေရှိရင်လည်း ထပ်ပို့လို့ရတယ်နော်… ဘား အားမနာနဲ့ ။ I love ice-cream!!”လို့ဆိုပြီး မင်းသားချောပိုင်တံခွန်ရဲ့ လက်ဆောင်ကြောင့် ပျော်ရွှ်င်နေတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာတင်ပေးလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပိုင်တံခွန်ရဲ့ လက်ဆောင်လေးကို ပရိသတ်တွေအတွက် ပြန်လည်ပြီးမဆဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်တွအားလုံးသာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့ရက်လေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Source….Phyu Phyu Kyaw Thein’s Facebook
အသံပါဝါအားေကာင္းလြန္းတဲ့ အဆိုေတာ္ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္းနဲ႔ ပရိသတ္ေတြကို အထူးတလည္ မိတ္ဆက္ေပးဖို႔မလိုေလာက္ဘူးထင္ပါတယ္။ ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္းရဲ႕ ထြက္ရွိသမွ် သီခ်င္းတိုင္းဟာဆိုရင္ ဂီတေလာကမွာ ေအာင္ျမင္လာလ်က္ရွိပါတယ္။ သူမကေတာ့ ဒီဇိုင္းဆန္းဆန္းေလးေတြနဲ႔ ေဖာ္ေ႐ြဆက္ဆံမႈေတြေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အခ်စ္ကို အခိုင္အမာရရွိထားတဲ့သူပဲျဖစ္ပါတယ္။
ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္းကေတာ့ သီခ်င္းအသစ္ေတြ ထြက္ရွိလာႏိုင္ဖို႔ကိုလည္း ႀကိဳးစားလ်က္ရွိပါတယ္။ သူမရဲ႕ အမွတ္တရပုံရိပ္ေလးေတြနဲ႔ ဗီဒီယိုဖိုင္ေလးေတြကို လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ တင္ေပးေလ့ရွိသူတစ္ဦးပါပဲေနာ္။ ဒီေန႔မွာေတာ့ ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္းက”တံခြန္ ေရ…ယူ႔ရဲ႕ Crazy Cream Ice-Cream Sandwich ေလး အရမ္းစားေကာင္းတယ္‌ေနာ္။ ေရခဲမုန႔္ကိုမွ ေရာင္စုံေပါင္မုန႔္နဲ႔ညႇပ္စားရတာ မ်ိဳး၊ အဆန္းေလး။ Chocochips ေရာ၊ Raspberry ေရာ ႏွစ္မ်ိဳးလုံးေကာင္းတယ္။ ေနာက္ flavour အသစ္ေတြရွိရင္လည္း ထပ္ပို႔လို႔ရတယ္ေနာ္… ဘား အားမနာနဲ႔ ။ I love ice-cream!!”လို႔ဆိုၿပီး မင္းသားေခ်ာပိုင္တံခြန္ရဲ႕ လက္ေဆာင္ေၾကာင့္ ေပ်ာ္႐ႊ္င္ေနတဲ့ ပုံရိပ္ေလးေတြကို လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာတင္ေပးလာခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ပိုင္တံခြန္ရဲ႕ လက္ေဆာင္ေလးကို ပရိသတ္ေတြအတြက္ ျပန္လည္ၿပီးမဆေဝေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။ဖတ္ရႈေပးၾကတဲ့ ပရိသတ္တြအားလုံးသာယာေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ေန႔ရက္ေလးေတြကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။